कतै यस्तो नम्बरबाट मिसकल आएको त छैन ? सावधान ! डुबाउला, हेर्नुस्, नेपाल दुरसञ्चारको सुचना - Sutra TV - Digital News Portal Sutra TV
कतै यस्तो नम्बरबाट मिसकल आएको त छैन ? सावधान ! डुबाउला, हेर्नुस्, नेपाल दुरसञ्चारको सुचना
केही दिनदेखि नेपालका धेरैले आफ्नो मोबाइलमा विदेशको अपरिचित नम्बरबाट मिसकल आएको र प्रत्यक्ष देखेका पनि छन् । +48 नम्बर भएको पोल्यान्डको नम्बरबाट मिसकल (एक रिङ) आउन सक्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज (बिहीबार) सूचना प्रकाशित गर्दै त्यस्ता कलहरु Wangiri Scam (One ring scam) भएकोले नउठाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। के हो त यो Wangiri Scam भनेको ? विस्तारमा जानौँ।
के हो वाङ्गिरी भनेको ?
वाङ्गिरी जापानी भाषाको शब्द हो। यसको अर्थ एक रिङ अनि काट्नु हो। वाङ्गिरी कल भनेको त्यस्तै हुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा आएको भए तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभएको छ की छैन। छोटो एक रिङमात्रै आउँछ। तपाईँ त्यसलाई उठाउनै भ्याउनु हुन्न। पछि हेर्दा मिस कल देखिन्छ। नम्बर तपाईँले चिनेको हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर हुन्छ।
यो देखेपछि तपाईँले कसले फोन गरेछ भनेर कलब्याक गरौँ गरौँ लाग्छ होला। अन्तर्राष्ट्रिय कलको सुविधा नलिएको पोस्टपेड मोबाइल भए त केही भएन तर प्रिपेड हो भने त कल जान्छ। कल गर्नुभयो भने तपाईँ फँस्नुभयो। यो नम्बरले प्रिमियम रेट सर्भिस भएको फोन नम्बरमा कल फरवार्ड गर्छ जसका कारण तपाईँको ब्यालेन्समा भएको ठूलो रकम काट्छ।
कसले गर्छ यस्तो कल ?
नेपालमा मात्र हो यस्तो ठगी ?
हैन, विदेशमा पनि प्रशस्तै हुन्छन् यस्ता ठगी। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि प्रशस्तै समाचार बन्ने गरेका छन्। सिएनएनले गएको मे महिनामा न्युयोर्क र एरिजोना राज्यमा यस्ता कलहरुको गुनासो आएको भन्दै समाचार लेखेको छ। बेलायती मिडियाले पनि सन् २०१८ मा यस्तो स्क्याम त्यहाँ हुँदै गरेको बारे सतर्क गराउन लेखेको छ। आइरिस टाइम्सले सन् २०१७ मै +269 (Comoros), +231 (Liberia), +216 (Tunisia) and +682 (Cook Islands)
बाट यस्ता ठगी कलहरु आइरहेकोबारे लेखेको छ। उसले यो नम्बरमा कल गर्दा अरबी भाषामा बोल्ने केटीले उठाएको पनि उल्लेख गरेको छ। गएको वर्ष मे महिनामा युएईमा पनि यस्तै ठगी कलको बिगबिगी भएको बारे त्यहाँको द नेसनलले लेखेको छ। विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरुले पनि यसबारे सूचना दिइरहेका हुन्छन्।
यस्तो कल आए के गर्ने ?
ठगीबाट बच्न सबैभन्दा राम्रो उपाय यस्ता नम्बरहरुमा कलब्याक नगर्ने हो। ट्रु कलर वा अरु उपायबाट नम्बरहरुको बारेमा खोज्दा पनि हुन्छ। यदि यस्ता कलहरु आएको छ भने इमेलहरु [email protected] वा [email protected] मा इमेलबाट जानकारी दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
नेपालमा पाँच वर्षअघि मायालु युवतीसित गफ गर्नुस् भन्दै एसएमएस पठाएर ठगी गर्न खोजिएको थियो। त्यतिबेलाको ब्लग पढ्नुस्…
मायालु युवतीसित गफ गर्नुस्, भन्दै तपाईँलाई एसएमएस पठाउनेको धन्दा खासमा यस्तो रैछ
“002431330218 मायालु युवतीहरुसँग गफ गर्न चाहनुहुन्छ ?”
“साँचो मित्रताले तपाईंलाई पर्खिरहेको छ !”
“अरुहरुलाई तपाईंसँग भेट्ने एक मौका दिनुहोस् !
“+24343381399, 2431330932 वा यस्तै नम्बर हरु को बारेमा मैले गरेको सोधिखोजीबाट प्राप्त नतिजा तपाईँहरुलाई पनि उपयोगी हुने ठान्दै बाँड्दैछु
यस्ता मेसेज कहाँबाट आउँछन् ?
यो मेसेज अफ्रिकन मुलुक कोङोबाट आउँदैछ। मुख्य शहरको नाम किन्शासा र कसाइ ओरिएन्टल हो।
यो कस्तो प्रकारको नम्बर हो ?
यस्तो नम्बरलाई स्क्याम नम्बर भन्छन्। यस्लाई स्क्याम प्रिमियम रेट नम्बर पनि भनिन्छ। स्क्याम भनेको ठग्नु हो।
फोन गर्नुस् भनेर किन भनेको ?
तपाईंले यो नम्बरमा फोन गरेपछि रु ६० देखि रु ३०० प्रति मिनेटसम्म शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईंले तिर्नु भएको यही रकमबाट केही रकम यो मेसेज पठाउनेले प्राप्त गर्दछन्। तपाईंलाई फोनमा धेरै भन्दा धेरै समय टिकाउन तपाईंलाई होल्डमा राख्ने, युवतीसँग गफ गराउने गर्दछन्।
के म यस्ता मेसेजहरुलाई रोक्न/बन्द गर्न सक्छु ?
सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं स्मार्टफोन, एन्ड्रोइड, आइफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंले एसएमएस ब्लक गर्ने सफ्टवेयर डाउनलोड गरी यस्ता मेसेज हरुलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ।
उनीहरुले नेपालीमा कसरी पठाउँछन् त ?
अहिलेको युगमा कुनै पनि भाषा लेख्न गाह्रो छैन। इन्टरनेटमा पाइने भाषा अनुवाद गर्ने सफ्टवेयरले यो सबै सम्भव छ।…एजेन्सी
आगामी साताबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपिने
प्रर्यटन वर्ष २०२०लाई लक्षित गरी रारामा फोरजी सेवा
आजबाट श्रम स्वीकृति इ–टोकन मार्फत जारी
१३ औं सागमा सहभागीहरुलाई निशुल्क फोरजी सिम